पर्बत कुस्मा मा रहेको बञ्जिजम्प नयाँ बर्षमा सञ्चालन हुने
पर्वत कुस्मा ।
आज हामी पर्बत कुस्मा मा रहेको बञ्जिजम्प पुल कहिले सञ्चालन मा आउँछ त ? सबै को मन मा खुल्दुली भएको होला ? भन्ने बारे पूरा जान्कारी समेटेर आएका छौ । देश बिदेश मा छरिएर रहनुभएका सम्पुर्ण दाजु भाइ दिदी बहिनी माझ यो पोस्ट सक्दो सियर गर्न भने नबिर्सनुहोला । हेर्नुहोस पूरा जान्कारी । कालीगण्डकी नदीमाथी निर्माणाधिन कुश्मा बलेवा बञ्जिजम्प अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०२० संगै सञ्चालन गरिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले मनाउने तयारी गरेको पर्यटन वर्ष र प्रदेश सरकारले मनाईरहेको आन्तरिक भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गर्दै विश्वकै नमूना यो बञ्जिजम्प नयाँ वर्षको उपहारको रुपमा सञ्चालन गर्ने लगानीकर्ताहरुको तयारी छ । कालीगण्डकीको खोंचमाथि ५२५ मिटर लामो स्टीलको पुल बनिसकेको छ । नौलो प्रविधिको लठ्ठामा झुण्ड्याइएको पुलबाट साढे दुई सय मिटर तल बगेको कालीगण्डकीको बिचमा बन्जी गर्न मिल्नेगरि प्राविधिकहरु निर्माणमा व्यस्त छन् । पर्वत जिल्लाका ११ जना यूवाको लगानीमा यो सबै काम भैरहेको छ ।
कालीगण्डकीको खोंचमा कुश्मा र बागलुङको बलेवालाई जोडेर २२८ मिटर उचाइबाट बन्जी गर्न मिल्नेगरि व्यवसायीले लगानी गरेका हुन् । लगानीकर्ताहरुले करिव १५ करोड अनुमानमा शुरु गरिए पनि डिजाइन र प्राविधिक कारणले करिव पा “च करोड बढेको जनाएका छन् । द क्लिफ प्रा.लि. मार्फत गरिएको लगानीमा कम्पनीकै नामबाट बन्जी, रिसोर्ट, स्काई साइक्लिङ र स्वीङ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको लगानीकर्ता यूवा राजु कार्किले जानकारी दिनुभयो । ०७३ बैसाखमा शुरु बन्जी सहित रिसोर्टका संरचनाको निर्माणकार्य करिव ९५ प्रतिशत सकिएको छ ।
यहाँ आउने पर्यटकलाई बास बस्नका लागि रिसोट बनाईदै छ । त्यसका लागि बलेवामा २५ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण भइरहेको छ । त्यसले पनि यहा “को वन्जी बिदेशीको रोजाइमा पर्ने सञ्चालक यूवराज जोशीले बताउनुभयो । उत्तर दक्षिण छिमेकि मुलुक जोड्न निर्माणाधिन कालीगण्डकी करिडोर र मध्य पहाडी राजमार्ग पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि भारतिय र चिनिया पर्यटक बढी आउने पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति November 29, 2019